यौनसम्पर्क गर्दा मेरो लिंग दर्‍हो (कडा) हुँदैन, किन होला ? अब मैले के गर्नुपर्छ ? - Namaste Times
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४ समय: १७:३८:५३
महत्त्वपूर्ण कुरा के भने दृढ अठोट तथा धैर्यता यसका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ । भावनात्मक तथा प्रेमपूर्ण सम्बन्धका लागि समर्पित भएर प्रयास गर्नुपर्छ । सम्बन्धलाई नै रमाइलो राख्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आफ्नी श्रीमती वा यौनसाथीको सहयोग तथा समझदारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रीमती वा यौनसाथीको समझदारीपूर्ण सहयोगले मनमा भएको चिन्ता हटाउन अनि आत्मविश्वास जगाउन मद्दत मिल्छ ।स्रोत- कान्तिपुर साप्ताहिक